Renato Sanches oo laga saaray Safka xulka Portugal
Wednesday, December 12th, 2018 - 09:56:22
Tuesday August 30, 2016 - 07:15:50 in Wararka by
Renato Sanches ayaa laga reebay xulka Portugal keddib dhaawac soo wajahay laacibkan, Bayern Munich ayaa sidaas xaqiijisay.
Laacibkan oo 19-jir ah ayaan loo magacaabin dooqa hore ee macallin Fernando Santos kuwaas oo Qarankooda u ciyaari lahaa kulanka Saaxiibtinimo ee ay wajahayaan Gibraltar iyo ciyaarta Is reereebka Koobka Adduunka ee ay la leeyihiin Switzerland, Sabab dhaawac oo dhanka Muruqa ah.
Bayern ayaa ku dhawaaqday in Sanches uusan ka mid aheyn Safka qarankiisa, keddib dhaawac kasoo gaaray laacibkan kulankii 6-0 Bundesliga ay uga badiyeen Werder Bremen Jimcihii lasoo dhaafay.
"Renato ayaa weli aad u jecel in uu qarankiisa Portugal metelo," waxaa tiri Bayern oo uu hadlay Agaasimahooda Volker Braun.
Sanches, oo ay kala soo saxiixatay kooxdani dhiggeeda Benfica bishii May, ayaa sii wadan doona baxnaanin caafimaad oo ay u sameyneyso kooxdiisa Bayer Munich keddibna wuxuu noqon doonaa mid tababar gaar ah qaata inta uu kusoo laabanayo xerada Tababarka ee kooxda.
Euro 2016 Xulka ku guuleystay ee Portugal ayaa sidoo kale noqon doona la’aanta kabtan Cristiano Ronaldo Labadooda kulan ee soo socda, Real Madrid Gooldhaliyaheeda ayaana kasoo kabanaya dhaawac soo gaaray kulankii 1-0 ay uga badiyeen Final-ka Euro xulka koobka marti geliyay ee France.
Waxaa sidoo kale Xalay la xaqiijiyay in Goolhaye Marafona lagu beddelay Anthony Lopes, isaguna wuxuu la tacaalayaa dhaawac dhanka Garabka ah.